China Capacitor switching switch ho an'ny famerenam-pahefana mahery amin'ny nfc-f2 0.4k rafitra fanamboarana sy orinasa | nivonto
Capacitor switching switch ho an'ny famerenam-pahefana mahery amin'ny rafitra nfc-f2 0.4k
Haavo afisy: ≤ 2500m
Ny mari-pana miasa: - 20 ℃ ～ + 55 ℃
Temperatura fitehirizana: - 25 ℃ ～ + 60 ℃
Famatsiana herinaratra miasa: 380V (ao anatin'ny dingana L1 sy L3)
Naoty miasa: rafitra 0.4kV
Naoty miasa ankehitriny: 90a (mahatohitra)
Fomba fanaraha-maso: fanaraha-maso seranan-tsambo
Fanjifana herinaratra: ≤ 3VA
Fotoana famaliana: ≤ 40ms
Fahafahana mifehy: ≤ 40kvar dingana telo 480v mahazaka herinaratra
≤ 10kvar tokana 250V mahazaka herinaratra
Fiarovana amin'izao fotoana izao: 0 ~ 99A azo ovaina
Fiarovana amin'ny maripana: Tsy misy
Fihenan'ny tsindry fifandraisana: ≤ 100mV
Mifandraisa mahazaka herinaratra: ≥ 1600V AC
Fifanarahana mifehy ny fifandraisana: interface RJ45
Famaritana adiresy: 1 ~ 32 azo apetraka
Na hanohana sehatra rahona: tsy voatery
Fomba entina miditra sy mivoaka: miditra sy mivoaka
Fametrahana: lalamby / visy
Dimy ankapobeny: 143 × 90 × 107mm
F2 andian-tsarimihetsika Mechatronics (synchronous) dia mihatra amin'ny switch switch of capacitor ampiasaina amin'ny tamber-kery hery reactive amin'ny rafitra 0.4kV. Izy io dia mandray ny teknolojia fandrefesana AC bitika 16 bitika ary alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny lozisialy 16 Ny hetsika fanaraha-maso dia mandray ny interface RJ45, ary ny fiasa miaro amin'ny fotoana ankehitriny dia manakana ny rafitra tsy hirindra. Ny kinova nohatsaraina dia manohana ny fampiharana ny cloud platform ary manome data lehibe ho an'ny asa sy fikolokoloana lavitra.
F1: Ahoana ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny ozinanao?
A1: Zava-dehibe indrindra ho antsika ny kalitao. Mba hifehezana ny kalitao tsara kokoa, manana QC matihanina izahay. Ny vokatray rehetra dia mandalo ny fanaraha-maso ataon'ny QC alohan'ny fanaterana.
F2: Inona ny MOQ-nao?
A2: Ny MOQ ho an'ny filaharana ambongadiny dia manomboka amin'ny 1pc, ho an'ny baiko OEM dia manomboka amin'ny 50-100pcs.
F3: Manolotra serivisy OEM & ODM ve ianao?
A3: Eny, hatramin'ny famolavolana ny vokatra ka hatramin'ny famonosana, ny injenieranay dia afaka mamolavola mitovy tanteraka amin'ny zavatra takinao. Misy karazana fanontana logo na famolavolana raha misy ny baikon'ny kaomandinao
F4: Ahoana no hahazoako santionany?
A4: Mazava ho azy fa tsy manome afa-tsy santionany maimaimpoana ho an'ny mpanjifantsika mahazatra izahay. Ho an'ny mpanjifa vaovao, azontsika atao ny mamerina ny sarany santionany aorian'ny fametrahana ny baiko betsaka.
F5: Inona ny ora fanaterana ny santionany?
A5: Mila 3 ~ 4 andro isika amin'ny santionany mahazatra, 4 ~ 6 andro na mihoatra raha toa ka mila OEM ny santionany, ary avy eo halefa amin'ny alàlan'ny express ary tonga afaka 15 andro.
F6: Inona ny fomba fandefasana?
A6: mety ho fandefasana ranomasina, Airlift ary Express (EMS, UPS, DHL, TNT ary FEDEX). Ka alohan'ny hametrahana baiko dia mifandraisa aminay mba hanamafisana ny fomba fandefasana tianao.
F7: Ahoana no fandoavana ny vola?
A7: Ho an'ny lamina santionany dia afaka manaiky Western Union, Wire transfer na Escrow isika.
Fa ho an'ny baiko Batch dia manohana ny fe-potoana fandoavam-bola amin'ny T / T izahay (fametrahana 30% mialoha, mandanjalanja 70% alohan'ny fandefasana).
Previous: NFC-401/402-F1 Mechatronics switch mifamadika
Manaraka: Nfc-401/402-F3-B Switch mifangaro miaraka amin'ny mpamadika faribolana kely sy switch
Switch switch switch an'ny manan-tsaina
Fanaraha-maso Capacitor Controller
Famindram-pahefana famindrana herinaratra
JKWI-12 (A / B) -32-S / D RJ45 interface interface ...
NFC-PCA-NF2 / 0.48 / 7% / 40 / G capacitor herinaratra ...
Nfc-401/402-LS switch ho an'ny 16 poin ...
NFC-TSC-S / D fantson'ny Thyristor fehezin'ny netw ...
JKWE-21 (A / B) Ampifandraiso ny switch compteur Facto ...